Kukwirisa Insights muCoronavirus Panic naDr. Wolfgang Wodarg? : Martin Vrijland
Kukwirisa Insights muCoronavirus Panic naDr. Wolfgang Wodarg?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 19 March 2020	• 6 Comments
Wolfgang Wodarg chiremba wechiGerman uye wezvematongerwo enyika weSPD. SaSachigaro weParamende Musangano wehutano weDare reEuropean, Wodarg akasaina gadziriso yakagadziriswa musi waZvita 18, 2009, iyo yakakurukurwa muchidimbu mumhirizhonga yekukurumidzira muna Ndira 2010. Akadaidzawo kuti kuongororwe kupomerwe zvisiri pamutemo kwemakambani ekugadzira mishonga paWorld Health Organisation's H1N1 flu campaign.
Imwe coronavirus inonzwika
Dr. Wodarg inotaura kuti pane hurukuro yemhedzisiro yenyaya "Emperor haina kana mbatyaImo makanga musina munhu wakatsunga kutaura kuti mambo akange asina kupfeka zvipfeko. Hapana munhu akatsunga kubvuma achiona izvi; kunze kwemukomana mudiki. Wese munhu airatidzika achidzvinyirirwa nevezera rake.
Iyi meseji ingangodzingwa senhau dzenhema neiyo nhepfenyuro yevatori venhau kana kunyatso kudzoreredzwa ne Facebook. Kana kuti Facebook icharega ichi chirevo kuburikidza? Ini ndinokuratidza nekuda kwechikonzero chandinotsanangura pasi pechinyorwa.
Pasi pehurumende inotevera tekinoroji hurumende, iwe uchangonzwa nyaya imwechete. Ipapo iwe unofanirwa kuteerera kuchokwadi chakatemwa chezvematongerwo enyika. Kuti hutongi hwehunyanzvi hwehunyanzvi hwekuita izvozvi hwave kuitika nekukurumidza, pasi pekufungidzira kwekoronavirus, ndinotsanangura zvakadzama ichi chinyorwa.
Kune kuravira kwangu, isu tinopupurira ratidziro yevatungamiriri vese vepasi apo iyo coronavirus kubuda iyo PsyOp (epfungwa yekuvhiya) akashandisa kukanganisa hupfumi uye kuzadzisa zvinangwa zvandakaisa mukati icho chinyorwa tsanangura. Izvi zvinoreva here kuti coronavirus haipo? Kwete, izvo coronavirus zvimwe zviripo. Nekudaro, izvo hazvibatanidze kuti inogona kuve yakagadzirwa nehana yakasikwa bioweapon. Izvo zvakare zvinogoneka kuti kukuvadza kwayo kusarongeka kune hyped.
Isu tiri kupupurira kuzarurirwa kwe 'master script' ini yandinotsanangura mubhuku rangu. Zvino zvawaona kuti ndakaregedza chokwadi, yave nguva yekubvisa chisaruro chekufunga zano rekurangana uye nyatso kuziva iyo 'master script', kuitira kuti iwe uone zviri kuitika uye kubva zvino unogona kutora chinzvimbo chakasimba. Mubhuku rangu ndakambofungidzira kuti kuchave neimwe dambudziko senge iri. Ndokumbirawo kuti uverenge bhuku racho wobva waverenga pazasi iyi link izvo zvinowedzera mubhuku.
Hoto yehuchi, inoshorwa kupikiswa
Zvingave kuti Dr. Wodarg yakaiswa kune imwe kuendesa yakanyatso wedzera kurira (ona vhidhiyo pazasi); ruzha runotsoropodza urwo rwunobata chose chokwadi, asi nemaune runoratidza zvikanganiso, kuti zvigozodzingwa senhau dzenhema. Semuenzaniso, zvemagariro enhau kuongororwa kunogona kuitwa uye webhusaiti senge martinvrijland.nl inogona kumanikidzwa kuvhara (kana ndaizove gadheni mairi). Mutambo unoridzwa nenzira yakasarudzika.
Chinangwa cheicho zano? Edza kugutsa munhu wese kuti chero chinhu chisiri chikuru munhau nhau nhau dzenhema.
Iyi nzira inonzi iyo 'huchi muhari' zano; zano umo masevhisi anoisa musungo nekusanganisa chokwadi che95% neruzivo rusina kunaka uye kuchizunza icho (chi) kuburikidza ne pawn (inoshora inopikisa). Saka ini handigone kutaura ndine chokwadi che 100% kunyangwe nyaya yaDr. Wolfgang Wodarg ari akaverenga zvisizvo. Ini ndinogona chete kubvumira kuzivikanwa kwangu. Iwe unogona kuwana izvi zvinongedzo pano pane webhusaiti uye mubhuku rangu.
Zvakangodaro, zvinobatsira zvakare kucherechedza nzira dzakadaro dzinodzora dzinopikisa 'huchi hwehuku'. Iwe uchazonzwa kanenge zvokwadi yese, asi ichaiswa muchetura nekashoma fake, kuti pakupedzisira mwana anofanira kukandirwa kunze nemvura yekugeza.
Capitalism uye sham democracy, mugwagwa unononoka unoenda kumaCommunist fascism
Martin Vrijland akaedzwa kuti aone coronavirus covid-19
Tags: to, Ander, communism, coronavirus, Dr., Featured, hapana, ruzha, has, hype. the, keizer, nguo, nguo, politburea, psyop, tekinoroji, Wodarg, Wolfgang
Zvinoshamisa kuona kuti vezvematongerwo enyika (kana mukatarisa muNetherlands) vese vari papeji rimwe. Kubva kuruboshwe kurudyi, ivo vese vanotora chikamu mune hype. Musiyano uripo chete munzira, umo mapato kurudyi uye kuruboshwe anoda kuvharwa kwakazara uye mamwe ane mwero mapato anoda kuvhara zvine mwero. Asi pachimiro vese vari muchirongwa uye vese vanotora chikamu. zvakafanana zvinoshanda kune midhiya, hapana munhu kusahadzika kana hutachiona hwekorona hwakaipa uye kuti matanho acho haasi kunyanyisa kuwanda (semuenzaniso 1000x).
Nekudaro, kuchine vanhu vachiri muNL (pamwe kupfuura isu tinofunga) vane kusavimbika kwakanyanya kana kushoma pane zviri kuitika, uye Jensen akaunganidzirwa izvozvo. Jensen anogona kubata vasina chokwadi uye vanhu vasingazvitendi, anogona kuzadzisa “huchi” basa muNetherlands kune vanhu vasingazvitendi.
Nei vanhu vari kuita izvi? Jensen anoreva chokwadi chakawanda mu podcast yake, asi zvechokwadi chando chinogeza chinouya kana iye achiratidza chikonzero nei nyika iri kufambisa nyika iyi: Anoti imhaka yekuti Trump inofanira kukundwa, uye nekuti "Right" (saka anti globalism) yaive kukunda uye izvo zvinofanirwa kukundwa kamwechete zvachose nekubudiswa kweudzvinyiriri kurwisa corona.
Saka anobata vasina chokwadi nevanhu vasingazvitendi ozovatumira musango.
Jensen ndiyo yekupedzisira mutsara uye inofanira kubata vaverengi kure neVrijland. Anongoramba achitengesa VaTrump segamba. Kwete, ndanga ndichiinyorera kwemakore: vese vezvematongerwo enyika kubva kuruboshwe kurudyi masks akasiyana pachiso chimwe chete. Jensen haana kumbobvira ataura nezvangu. Hapana munhu anoshinga uye angangoreva kwandiri uye bhuku rangu. Ndiko kutyisidzira kukuru kwavari.
Nehurombo, vanhu vazhinji vanotora mune ino "controldoor spider" inodzorwa.
Zvichida vatauri vanogona kutumira hurukuro kune youtube podcast yejensen ine chinongedzo kune ino saiti. Pamwe zvese zvataurwa zvichanyatso bviswa nekukasira, asi kana zvisiri, zvinowanzoitika kuti vamwe vanozoperera pano.
Musoro wehove akanyora kuti:
Martin ari kuwedzera zvakanyanya
MakanakaBabylon akanyora kuti:
Kutaura nezvekupikiswa kwakadzorwa, Jensen haasi mumwe wavo kana
« Maitiro ekuita ne coronavirus (kuvhara) matanho: matipi anoshanda
Dzidza zvekuita uye zvekuita mune iri kuuya coronavirus kukiya »
Total Visits: 1.488.555